Xaflad sagootin loo sameeyay Maxamad Jaamac (skinny) oo ka dhacday Gothenborg Sweden
Xaflad sagootin loo sameeyay Maxamad Jaamac (skinny) oo ka dhacday Gothenborg Sweden Mogadishu isniin 3 December 2012 SMC
Xaflad sagootin loo sameeyay Maxamad Jaamac (skinny) oo ka dhacday Gothenborg Sweden Waxaa xalay dhacday xaflad sagootin ah oo loo sameeyay Maxaamad Jaamac (Skinny) oo kamid ah ciyaartooyda kooxda Somalia Sport Klubb ee ka dhisan magaalada Gothenborg Sweden.
Waxaa xafladaan kasoo qeybgalay dhalinyarada kooxda qaar kamid ah iyo hogaanka kooxda iyo waalidiin.
Ugu horeyntii waxaa hadalka qaatay Macalin Adan Oor oo kamid ah hogaanka kooxda isla markaana ka hadlay safarka Maxamad una hambalyeeyay in guul iyo wanaag ku gaaro wadan jabuuti oo uu ka dheeli doono ciyaaraha heerka koowaad ee Jabuuti, Macalin Adan wuxuu kaloo ka hadlay in kooxdu ku rajo weyntahay in eey soo saarto dhalinyaro kale oo loo iib geeyo sida wadamada Yurub.
Waxaa hadalkii qaatay Mudane Ibrahim Qalinle oo ah Gudoomiyaha Kooxda oo kahadlay muhiimada ku dayashada mudan oo ah in Maxamad oo kamid ahaa kooxda uu u ciyaar tago wadanka Jabuuti una hambalyeeyay Maxamad in safarkiisa guull ka dhamaado.
Waxaa isna goobta ka hadlay Macalinka kooxda Macalin Cumar Gurey oo u hambalyeeyay Maxamad isla markaasna ka hadlay arimo kale oo ku saabsan tarbiyada caruurta iyo muhiimada eey leedahay in waalidku uu garab taagnaado canugiisa ilaa uu ka hanqaado mar hadaan ku noolnahay wadan qurbo ah.
Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay marti sharaf badan eey kamid yihiin Qaaluu Slaaama, Bashiir Qolif, C/raxmaan Aadan.
Waxaa xafladii lagu soo gabagabeeyay abaalmarino la gudoonsiiyay Maxamad Jaamac.